बाल–ज्येष्ठ अधिकार र विकासको सम्बन्ध
अमेरिका र अस्ट्रेलियामा नेपाली महिलाले प्रहरी हिरासतमा बिताएका छन् । कुनै चोरी, ठगी, अपराध गरेर उनीहरू प्रहरी कठघरामा पुगेका होइनन् । नेपालमा सामान्य लाग्ने आफ्नै छोराछोरीलाई हप्काए, पिटे, तर्साए, एक्लै छोडेबापत नेपाली महिलाले यस्तो नौलो अनुभव गर्न पाएका हुन् ।
सडक अस्तव्यस्तताको आर्थिक घाटा
सडकमा सवारी साधनको चाप थामिनसक्नु छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रले अहिले तुरुन्तै आयात बन्द गरिहाल्न सक्दैन । सवारी साधनहरू ओभरलोडेड छन् । सीमित सडक पूर्वाधारका बीच सवारी साधनहरू असीमित बनेर आउँदा पिक आवर समय अघिपछि पनि पट्यारलाग्दो जामको अवस्था देखिन्छ ।
अनुदान लिन अनिच्छा
हेटौंडा : भूमिहीन भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई जग्गा खरिदका लागि सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भने पनि मकवानपुरका भूमिहीन लाभग्राहीले भने त्यतातर्फ चासो देखाएका छैनन् । मकवानपुरमा करिब ४ हजार २ सय लालपुर्जाविहीन भूकम्पपीडित परिवार भएको अनुमान गरिए पनि असार मसान्तसम्ममा जम्मा ९७ परिवारले मात्र जग्गा खरिदका लागि निवेदन दिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईले जानकारी दिएको छ ।
लघुवित्त अभियानमा स्वावलम्बन अवधारणा
सभ्य, सुसंस्कृत र स्वावलम्बी समाज निर्माणका लागि नागरिक असल हुनुपर्छ । गरिबीबाट मुक्त समाज भयो भने मात्रै नागरिक असल बन्न सक्छ । बहुआयामिक विकास भयो भने मात्रै स्वावलम्बी समाज निर्माण हुन सक्छ र असल नागरिक बन्न मद्दत पुग्छ । असल नागरिक कसरी तयार हुन्छन् त ?
राज्यको भूमिका बढाउने कि घटाउने ?
विगतमा अत्यधिक घाटाका कारण बन्द गरिएको नेपाल औषधि लिमिटेड, तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन अग्रसरता देखाए । खासमा नेपाल औषधि लिमिटेड, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को गुणस्तरीय उत्पादन अभ्यास (जीएमपी)मा मानक पु¥याउन नसक्दा बन्द भएको थियो ।